ညီလင်းသစ်: အာရုံများ ပျံသန်းရာ နိုင်ငံကလေးသို့ (၄)
Posted by ညီလင်းသစ် au 2.4.12
ပုဂံဆိုတဲ့အသံကြားရင်ကို အသွေးအသားထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲချစ်ပါတယ်။
နေဝင်ချိန်ပုဂံရှုခင်းက ဘယ်တော့မှ ရိုးဟောင်းသွားမှာ မဟုတ်တဲ့ ပန်းချီကားတွေ..
အန်ကောဝပ်မှာလည်း မီးပုံးပျံရှိပါတယ် ၂၀လား၂၅လားပဲပေးရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြိုးနဲ့ဆိုင်းထားပြီးအမြင့်တနေရာအရောက်မှာ ပြန်ချတာမို့ လှုပ်ရှားသွားလာတဲ့ ခံစားမှုမျိုးမရခဲ့လိုက်ဖူး။ စီးတော့စီးဖူးချင်ပါသေးတယ်
Borobudur ပေါ်က မနက်အရုဏ်နေထွက်ချိန်လည်း သိပ်လှတာပဲ၊ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေတဲ့ဘုရားကို နေရောင်အောက်မှာ တဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးကြွလာတဲ့အခါ...
ဲSpeechless, jaw dropping, amazing photos make me home sick.
pretty nice, i was also there in 3rd week of feb, n took some sunset shots, but your photos are flawless, is that your telephoto f2.8? m also thinking to save my lunches :) lol anyway waiting for no5, i deleted the previous comment, sorry for the mess. cheers!
I am your regular reader, I never leaveamessage though. I like all your posts about going back to Myanmar.Looking forward for the coming posts :)
စိတ်ဝင်စားလိုက်သမှ ၂ နာရီတောင်ကျော်သွားတာ မသိလိုက်ဖူး
ဓါတ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး မြန်မာပြည်သွားလယ်ချင်လိုက်တာ။ လာမယ့်နွေ ပြန်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်။ ပိုက်ဆံစုလိုက်ဦးမယ်။ share အတဲ့အတွက် ကျေးဇူး။ ဓါတ်ပုံတွေရှိရင် တင်ပေးဦး၊ ဆက်လဲရေးဦးနော်။
အတိတ် အဟောင်း ကို တူးဖော်မိသွား ပြန်ပါပြီ။
ပေါ်ကနေ ပုဂံနံနက်ခင်းအလှကို ကြည့်ခဲ့ပါရဲ့...၊ဒါ
သိပ်လှတဲ့ ပုဂံနေဝင်ချိန်ပုံတွေကို ကြည့်ရတော့မှာပေါ့
ဒါနဲ့ အကို့ ဓာတ်ဘူး(ကင်မရာမှန်ဘီလူးကို ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးခေါ်တဲ့နာမည်:)))ကြီးက
သိပ်ကောင်းတဲ့ပုံတွေရယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့အရေးအသား ရယ်ကြောင့် ပုဂံ ကပိုလှသွားပါတယ်။
မိဘတွေတာဝန်နဲ့ ပုဂံနဲ့ သိပ်နီးတဲ့မြို့၂မြို့မှာ ၉နှစ်နီးပါးနေခဲ့ဖူးလို့ အမျိုးတွေနဲ့ မိတ်ဆွေတွေလာတိုင်းလိုက်ပို့ခဲ့ရတာ လတိုင်းလိုလိုပုဂံကိုရောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ ပုဂံဆိုတာ သိပ်ရင်မခုန်တော့တာတောင်.. အခုပုံတွေနဲ့အရေးအသားကြောင့်လွမ်းသွားမိတယ်
သံတဲမှာသုံးလေးခါတည်းဘူးတယ်။ အဲဒီရေးဗားဗျူးမှာတော့သူငယ်ချင်းအရင်းတွေနဲ့ တည်းခဲ့လို့သိပ်ပျော်ခဲ့တယ်။ ကျမလည်းမြစ်ပြင်ကြီးနဲ့ တောင်တန်းတွေကိုထုိုင်ထိုင်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ ငှက်လေးတွေလည်းကြည့်ရင်းပေါ့။
ပုံတွေအားလုံးလှလွန်းလို့ ဘယ်ဟာအကြိုက်ဆုံးပါလို့ ပြောဘုို့ တောင်ခက်သွားတယ်။
အဲဒီလို ပုဂံရဲ့ နေရောင်ပျပျ မှုန်မှုန်မှိုင်းမှိုင်းပုံကို မြင်လိုက်ရတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ကြည်နူးသလိုလိုနဲ့ မျက်ရည် ၀ဲ ရတယ်..
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် ပုဂံကတော့ တစ်ခုပဲ ရှိတယ်ဆိုတာလေးရယ်..
ရွှေရောင်တဖိတ်ဖိတ် တောက်ပနေခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်ထဲက သတို့သမီးရယ်ကို...
သိပ်ကိုကောင်းတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ ကိုညီရေ...
အမလည်းဒီတစ်ခေါက်မြန်မာပြည်ပြန်ရင်ပုဂံကိုသွားမလို့...ခလေးတွေကိုပြချင်လို့လေ....း) ဓာတ်ပုံလေးတွေကောင်းလိုက်တာ...
truly sensational. thanksamillion bro
Thank you so much for amazing photos. Can I copy those photos to share with friends?
ပုဂံအကြောင်းလာဖတ် ပုံလှလှတွေ တဝကြီး ကြည့်သွားပါတယ်။ အရုဏ်တက်ကို တခါပဲလား ကြည့်ဖူးတယ်... မထချင်လို့။ အမြဲအကြည့်များတာကတော့ ဆည်းဆာပါပဲ :D
ဓာတ်ပုံရိုက်ချက်တွေ အရမ်းကောင်းတယ် အစ်ကို... ပုဂံရှုခင်းတွေကလဲ တကယ် အံမခန်းပါဘဲ... မြန်မာမှန်ရင် ပုဂံကို ရောက်ဖူးရမယ်တဲ့ ကျွန်တော်လဲ ပုဂံကို တစ်ခေါက်လောက်တော့ မရောက်ရောက်အောင် သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ် အစ်ကို...
ကောင်းပါပြီ ခင်ဗျား...၊း)
ကြုံရင်၊ အဆင်ပြေရင်တော့ စီးသာစီးဗျို့..၊ ဘာဖြစ်လဲ၊ တသက်မှာ တခါပေါ့..ဟုတ်တယ်ဟုတ်?း) Borobudur မှာ ညီရိုက်ထားတဲ့ ပုံတွေ ရှိရင်လည်း ကျနော်တို့ကို ပြပါဦး...၊း)
♫ အတိတ်တွေက မှုန်ဝါးပေမယ့် ♪♪ တခါတလေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေ ရှိလာတော့လည်း ♫..♪♪း)
You make me feel flattered...ha ha. Thanks ! :D
Ko Kyaw Min Naing ...
Yes, it was telelens f/2.8 indeed. If you say to save lunches for it, I'd say just go for it. You'll never regret.း) No worry, there's no mess. Thanks for your comment bro !
Thank you for your regular visit ! And, thanks also for your very first comment! I appreciate it, indeed. :)
စိတ်ဝင်တစားနဲ့ အခုလို အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ ညီမရေ..၊
ဟုတ်ကဲ့၊ ဆက်လည်း ရေးပါဦးမယ်၊ ဓါတ်ပုံတွေလည်း တင်ပေးပါ ဦးမယ်၊ ပိုက်ဆံတွေလည်း အများကြီး စုနိုင်ပါစေ၊ လာမယ့်နွေမှာလည်း ပြန်နိုင်ပါစေဗျား..၊း)
တူးမိသွား ပြီလား အတိတ်ဟောင်းကို...၊ ဟင်း.. ကျနော် တော့ အတိတ်ဟောင်း တူးဖော်သူတွေနဲ့ချည်း တွေ့နေပါလား..၊းP
အာ.. အဲဒီလိုတော့ မနောက်ကြေးလေ၊ ဘယ့်နှယ့် သမိုင်းပညာရှင်က ပါလာတာတုန်း၊ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ..၊ ကျနော်ဘာမှ မသိပါဘူး၊ ဓါတ်ပုံတွေ လှတယ်ဆိုရင်ပဲ ပြည့်စုံနေပါပြီ...နော်၊း)
သြော်.. ကိုညိမ်းနိုင်လည်း မီးငြိမ်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့သေး သကိုး..၊ ဒါ့ကြောင့် နံရံမှာ correction pen နဲ့ ရေးသွားတဲ့ လက်ရာက ကိုညိမ်းနိုင် လက်ရေးနဲ့ တူသလိုလိုတော့ ထင်သား..၊း) အလကား နောက်တာပါဗျာ.. ဟားဟား၊ ရုတ်တရက် နောက်ချင်စိတ် ပေါ်လာလို့ ချရေးလိုက်တာဗျ၊ ကိုညိမ်းနိုင်က ဒီလို လူစားမျိုး မဟုတ်တာ ကျနော့်အနေနဲ့ ၁၀၀% သေချာပါတယ်၊ ကျနော့်ဓါတ်ဘူးက ရေနွေးရော၊ ရေအေးပါ ထည့်လို့ရ.. အာ..ရှုပ်ကုန်ပြီ၊ မှန်ဘီလူးက Canon 70-200mm f/2.8 ပါ..၊း)
ပုဂံနားမှာ ၉ နှစ်တောင် နေခဲ့ရတာ မိုက်တာပေါ့၊း) တဝကြီးကို လည်ခဲ့ဖူးမှာပဲ၊ အခု ပုဂံက တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ်ကိုတောင် မတူတော့ဘူးဗျ၊ မွမ်းမံတာတွေ အရမ်းများလာ နေပြီ..ဟူး၊း(
သြော်..ဒါ့ကြောင့်ဖြစ်မယ်၊ သံတဲဟိုတယ်မှာ မအိုင်အိုရာရဲ့ အငွေ့အသက်တွေလိုမျိုး ခံစားခဲ့ရတာ၊း) အခုမှ သိသွားတယ်..ဟားဟား၊း)) (စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်၊ ခင်မင်ရာ ခင်မင်ကြောင်း ပါဗျာ)၊ ဟုတ်တယ်နော်၊ ပုဂံကတော့ ဘယ်တော့မှ ရိုးသွားမယ် မထင်ဘူးဗျာ..၊
'သန္တရသ'..? အဲ.. ကျနော်လည်း မသိဘူးဗျ၊ ခံစားလို့ကို မဝနိုင်တာနဲ့ပဲ ဘာ 'ရသ' လဲဆိုတာ ရှာဖို့တောင် ခပ်မေ့မေ့ ပါပဲဗျာ..၊း)
စိတ်ဝင်တစား ရင်ဘတ်နဲ့ ဖတ်သွားလို့လည်း ကျေးဇူး အများကြီး တင်ပါတယ်ဗျာ..၊ တိတ်ကဲ ဘရိုး)
သိပ်ကောင်းတဲ့ အစီအစဉ်ပေါ့ဗျာ၊ ပုဂံကို မိတ်ဆက် အပေးသင့်ဆုံး သူတွေဟာ ကိုယ့်သားသမီးတွေက လွဲလို့ တခြားဘယ်သူများ ရှိနိုင်ဦးမှာလဲ...၊
Thank you for your visit and kind comment !!!
အေးအေးသက်သာနဲ့ ဆက်သာ လိုက်ခဲ့ပါ ညီမရေ..၊
Sar Chit Thu ...
Sure ! Just go for it as you wish, please !!! Thanks for your comment, too.
ဒါပေါ့ဗျာ၊ holidays သွားတာ ဆိုတော့လည်း စောစောစီးစီး ဘယ်ထချင် မှာတုန်း..၊ ကျနော်လည်း ဒီအတိုင်းဆို မနိုးဖို့များလို့ နှိုးစက်နဲ့ ထရတာ...၊း)
ကျေးဇူးပါဗျာ၊ ကောင်းတယ်၊ အဆင်ပြေရင် သွားသာ သွားဗျို့..၊ အနည်းဆုံး တခေါက်ဖြစ်ဖြစ်တော့ ရောက်ဖူး သင့်တာ အမှန်ပါပဲ၊ နောက်ပိုင်း မြေငလျင်တွေ၊ မုန်တိုင်းတွေ၊ မွမ်းမံမှုတွေနဲ့ ဘယ်လောက်ဆက်ပြီး ရှိနေဦးမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ဘူးလေ..။
ညီကင်မရာက canon IXUS လေးမို့ ISO ကလည်း မနိုင် shutter speed ကလည်းနှေး၊ ရိုက်တဲ့သူကလည်း လက်ကတုန်၊ မှုန်ဝါးဝေသီမပီပြင်ဝိုးတဝါးလေးတွေမို့ ကိုညီ့ပုံတွေကြည့်အပြီးမှာ ပြဖို့ဝန်လေးရှက်ရွံ့သွားမိပါတယ်။ ကိုညီတကယ်ကြည့်ချင်တယ်ဆို မေးလ်ထဲကို တပုံပို့ပေးမယ်။ :P
ရင်သပ်ရှု့မောဖွယ်ပါပဲဗျာာ အိမ်အပြန်ကိုသိပ်ကြိုက်တယ် ....................
ပုဂံကတော့ မြို့အ၀င်မုခ်ဦးကြီးမြင်ကတည်းက ရင်ထဲ တမျိုးကြီးပဲ။ ဘိုးဘွားတွေရဲ့မြေလို့ ခံစားရတယ်။ အရမ်းပူပေမယ့် သွားဖို့ ဘယ်တော့မှ မပျင်းဘူး။ အိမ်ပြန်ချင်စိတ်ပေါက်သွားတယ် ကိုညီလင်းသစ်ရေ။
ကျနော် တကယ်ကြည့်ချင်ပါတယ်၊ အားငယ်စိတ်တွေ မထားပါနဲ့ဗျာ၊ ကျနော်တို့ အားလုံးက အပျော်တမ်း သမားတွေပဲ မဟုတ်လား..၊ ဘယ်ပြည့်စုံ နိုင်ပါ့မလဲ၊ :) nyilinnthit@gmail.com
ဟုတ်ကဲ့၊ ကြားရတာ ဝမ်းသာပါတယ် ညီရေ..၊
ကျနော်လည်း အဲဒီလိုပဲ၊ ဒီမြေမှာ သူတို့တွေ ရှင်သန်၊ လှုပ်ရှားခဲ့ ကြတယ် ဆိုတဲ့ အသိနဲ့တင် အပူဒဏ်ကို မစဉ်းစားမိတော့ဘူး..။း)
ရင်သပ်ရှုမော အံသြဘနန်း လှလွန်းပါတယ်။
ပြောစရာစကားတွေ အများကြီးရှိရင် ဒီထက်ကို ပိုပြောချင်သေးတယ်
ကျွန်မသာ ပုဂံကိုသွားရိုက်ရင် ဒီလိုပုံတွေ ထွက်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။
ကိုည်ီလင်းသစ်ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်သွားတာထက်တောင် ပိုစိတ်တိုင်းကျမိတယ်။
တကယ့်ကို လှပခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ ပုဂံရဲ့ ပုံရိပ်တွေပါဘဲ။ ပြောစရာစကားလုံးတောင် ရှာမတွေ့အောင်ပါ။
၀ိုးးးးး ပုံတွေ လှလွန်းလိုက်တာ.....။ ဘယ်လိုများ ရိုက်လာပါလိမ့်။ ကျွန်မနောက်တစ်ခေါက်သွားရိုက်တောင် ဒီလိုပုံတွေ ထွက်မှာ မဟုတ်ဘူးရှင့်။
ဟဟဟားးး ကင်မရာအမျိုးအစားအတူတူနဲ့ ရိုက်ရင်တောင်လေ.....။ တစ်ကယ်ပါပဲ လက်မက ထောင်စရာ ၂ခုပဲ ရှိလို့နော်။ သိတ်ကြိုက်ပါတယ်။
အယူအဆရော၊ အလင်းအမှောင်တွေရော၊ ကင်မရာ ယူပုံလေးတွေရော......။ ကျွန်မ ခရီးသွားဦးမှာမို့ ပြန်လာမှပဲ မီရာက ဆက်လိုက်ပါ့မယ်။
လှလိုက်တာ အစ်ကိုရေ.. စာနဲ့ပုံနဲ့ သိပ်ဆွဲဆောင်နိုင်တာပဲဗျာ...
ပုဂံရဲ့ မနက်ခင်းရော နေဝင်ချိန်ပါ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် သိပ်လှတာပဲ။ ပုံတွေသိပ်လှတယ်ဗျာ။ ခံစားခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ဟိုနေ့တွေကတော့ ရောက်သားဒီနေ့မှနေကောင်းလို့ သေချာပြန်လာကြည့်ဖြစ်တယ်အစ်ကို...။ နေ၀င်ချိန်ပုံလေး လွမ်းစရာကောင်းတယ်...။ တပုဒ်လုံးဖတ်ရင်း ရင်ထဲမှာတဆစ်ဆစ်နဲ့.... ။ ဝေမျှခံစားခွင့်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ..။
အစ်ကိုရေ ဒုတိယမ္ပိ လာဖတ်တာ အပိုင်း-၁ ကနေ ၄ အထိကို ဖတ်လို့ မ၀ဘူး... ကိုယ်တိုင်လည်း မကြာခင်က ပြန်ထားပေမယ့် အလည်သက်သက် မဟုတ်တော့ အစ်ကို့ပုံတွေ ပြန်ကြည့်ပြီး လွမ်းရတယ်... အခုမှပဲ ကောမက် ပေးဖြစ်တော့တယ်... ဆက်ရန်မျှော်မည် :P
ညီလင်းနဲ့တူတယ် နိုင်ငံတကာမှာပင်လယ်ကမ်းစပ်တွေ ကောင်းပေ့ဆိုတာတွေအများကြီး ရှိပါတယ် ပုဂံဆိုတာဘယ်နှယ်ခုရှိနိုင်မလဲ ဗမာပြည်ပြန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့စကားစပ်မိရင် ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားဖို့တော့ ဘယ်တော့မှ မတိုက်တွန်းခဲ့ဘူး.. ဒါပေမယ့် အမ ပြန်လည်တုန်းကတော့ ပုဂံကိုသွားချင်ပေမယ့် မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ၉၄ ၉၅ လောက်တုန်းက ကျောင်းက သူငယ်ချင်းတွေဆရာမတွေနဲ့တခေါက်ဘဲရောက်ခဲ့ဖူးတယ် . အဲတုန်းက တန့်ကြည်တောင် ဆရာတော်ကျောင်းမှာတည်းခဲ့တာပေါ့ ရောက်ဖူးသမျှ ဘုရားတွေပေါ်က တက်လို့ရသမျှ လှေခါးထစ်တွေအကုန် မမောမပမ်း တက်ခဲ့ရတာတွေ သတိရလိုက်တာ .. ပုဂံ မြေ ဆိုတာ ရှိနေသမျှ တချိန်ချိန်တော့ ရောက်ဦးမှာပါ ( ဒီနေ့မွေးနေ့ ၂၀၁၂ ဧပရယ် ၈ ရက်နေ့အမှတ်တရ အချိန်ရတာနဲ့ ကွန်မန့်ရေးသွားပါတယ် ဟိုနေ့ကဖတ်ပြီး မအားတာမို့ )
OMG ဓာတ်ပုံတွေက လှလိုက်တာ ကိုညီရေ..တကယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမော ဖြစ်ရတယ်
..ပုဂံမရောက်တာ ၁၀နှစ် ရှိပြီ..မြန်မာတို့ ရဲ့ပုဂံက ချစ်စရာကောင်းလွန်း၊ ခမ်းနားလွန်းလှတယ်
ပုံတွေက လှလိုက်တာ..တကယ့် Pro ပဲ..။
တကယ့်ကို ရင်သပ်ရှုမောပဲ...။ ကျွန်မတို့ မြန်မာပြည်ကြီးမှာ တကယ့်နေရာတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိရတယ်။ ပုဂံကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အတွက် မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။
ကဲ..အပိုင်း (၅)သို့ ဆက်လက် ချီတက်ပါဦးမည်..။
ပို့စ်တွေရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေနောက် လိုက်နေတာ
အလုပ်လဲ ခုထိ ဟုတ်တိ ပတ်တိကို မလုပ်ရသေးဘူး အကိုရေ
အခု 2012ကမှ မြန်မာပြည် ပြန်လာခဲ့တာ ဆိုတော့ နောက်တစ်ခေါက် ဝေးဦးမှာပေါ့ :(
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လှတဲ့ ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေ အများကြီး ရှိ တယ်၊ ဒါပေမယ့် ပုဂံကတော့ တစ်ခုတည်းပဲ ရှိတယ်-
ဆိုတဲ့ စာသားလေး သဘောကျတယ်...
နေ့လည် break ချိန်မှ ထပ် ဖတ်ဦးမယ်..နောက်ထပ်ပို့စ်တွေကို
အခုတော့ အလုပ်ထဲ ပြန်ဝင်လိုက်ပါဦးမယ်ရှင်.....:))
You bring us to bagan. Love your post. I will continue read others. :D